Shiinaha Dahaarka Rubber, wareejinta biyaha, UV burushka timaha timaha korontada oo leh warshad barkinta oo rogrogmi karta iyo soo saarayaasha | Yongsheng
Dahaarka caagagga, wareejinta biyaha, UV buraashka timaha timaha korontada oo leh barkinta dabacsan
Waxyaabaha: ABS, caag ， nylon,
Burush suuf leh barkinta dabacsan iyo biinanka. Haddii aad leedahay timo fiican, qaro weyn, midab leh, qoyan ama qalalan, The Brush Paddle Brush wuxuu la shaqeeyaa dhammaan noocyada timaha, si tartiib ah ayuu u kala baxayaa markaad u cadayanayso timahaaga dhererkiisa. Ma jiidi doono ama jiidi maayo, laakiin beddelka wareega ayaa si tartiib ah madaxaaga u duugi doona. Sidoo kale waxay ku guuleysan kartaa natiijooyinka saloon ee xirfadeed ee guriga loogu talagalay qaabeyn deg deg ah oo wax ku ool ah, oo ku habboon kala-goynta iyo qallajinta qallajinta si aad timahaaga uga qaadato qoyan ilaa qalalan. Waxay timahaaga uga tagaysaa jilicsan, siman oo jilicsan. Soo bandhigida qaabab dhaqameed loogu talagalay in lagu toosiyo, lagu qiyaaso, ama laga jaro ama qaab inta la qalalayo, waxay ku yimaadaan daabacado ubaxyo iyo midabbo nacnac ah. Ku rid aragtida baddel taddalka salkiisa barkin ballaaran, jilicsan iyo kubbadda cirbadaha, si aad u shaqeyso oo aad ugu raaxaysatid cadayasho la'aan iyo xoqid la'aan. Burushka suufka ayaa ku habboon timo dhaadheer oo toosan ama timo qaro weyn. Barkinta hawo ka buuxsantay waxay u shaqeysaa sidii inch inch absorber absorber ah madaxaaga jilicsan. Tilmaamaha dahaarka leh, wareegsan ee biriijku waxay gacan ka geysaneysaa kahortagga dhicitaanka iyo jajabka waxayna u dhaqmeysaa kala-furfuris la'aan.
Burushka timaha suufka leh noocyo kala duwan oo gacmeedyo casri ah iyo ergonomic. Gacan kuwan waxaa si gaar ah loogu talagalay gacanta ugu badan iyo raaxada halka qaabeynta. Way fududahay in lagu gaaro natiijooyinka saloon ee xirfadleyda ah guriga burushkan. Waxaad dooran kartaa noocyo fara badan oo kala duwan oo ah gacmo-qabasho, gacan-qabsi fudud oo fudud oo kala-geddisan, gacanka oo leh naqshad saxan, qaabka gaarka ah ee gacanta loogu talagalay….
Hore: Burush timo wareegsan oo xirfadlayaal ah oo leh caabbinta heerkulka sare ee qaabab kala duwan
Xiga: Dahaarka caag, UV koronto, daabacaadda shinnida, wareejinta biyaha burushka timaha oo leh muraayad Intelliflex ah
Burush Timaha Burush
Burushka timaha adag ee adag
Burushka Timaha Hollow
Burushka Timaha Wareega Wareega ah
Cadayashada timaha saddexagalka
Burushka Timaha Qoryaha
Daahan Rubber, UV koronto, daabacaadda shinning, w ...
Xirfad timaha wareega wareega leh dabeecad sare ...